Xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ee dalka laga diiwaangeliyay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ee dalka laga diiwaangeliyay
Waxaa maalintii 2aad dalka laga diiwaangeliyay kiisas badan oo dhimasho ah, sida ku cad jadwalka maalinlaha ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliya.
Jadwalka waxaa ku cad in afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay ay sagaal qof xanuunka COVID-19 ugu geeriyootay dalka, waana waa maalintii 2aad oo xiriir ah oo dalka laga diiwaangeliyo min sagaal xaaladood oo dhimasho ah.
Warbixinta Wasaaradda Caafimaadka waxaa caawa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafaay xanuunka laga baaray 637 qof, lagana helay 127 qof.
Sidii caadada ahayd waxaa xaaladaha ugu badan laga diiwaangeliyay Magaalada Muqdisho, oo waxaa laga diiwaangeliyay 126 kiis, halka kiiska kalena laga diiwaangeliyay Hirshabelle.
73 ka mid ah dadka xanuunka laga helay waa rag, iyadoo 54 kalena ay haween yihiin, iyadoona tirada guud ee dalka laga diiwaangeliyay ay gaartay 5,500 xaaladood, waxaana ka bogsatay 3,750 qof, halka dhimashaduna ay gaartay 172 qof.
Dowladda Somaliya ayaa maanta soo saartay awaamiir lagu xakameynayo xanuunka saf-marka ah ee COVID-19, ee fayriska Corona uu keeno.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo gelinkii dambe ee maanta Magaalada Muqdisho kula kulmay xubno ka socday Guddiga Ganacsatada ee Gobolka Banaadir ayaa ka dalbaday inaysan shacabka ku qaaliyeen maciishadda iyo waxyaabaha daruuriga u ah nolosha bulshada, xilligan adag ee dalku wajahayo soo kaba kacleynta xanuunka COVID1-9, taasi bedelkeedana ay dowladdu u sameynayso canshuur dhaaf badeecooyinka daruuriga.
Muqdisho ayaa noqotay halka ugu daran ee soo kaba kacleynta xanuunka, uu sida weyn u saameeyay, iyadoo kiisaska ugu badana laga diiwaangeliyo maalin kasta.
Previous articleRooble oo ganacsatada kala hadlay inaysan raashiinka ku qaaliyeen shacabka
Next articleGeneral Odawaa oo sheegay in hawlgal lagu dilay 20 xubnood oo Shabaab ahaa